Archive du 23/04/2012
Filoha Marc Ravalomanana
Tsy nanaiky ho tonga rajakom-bazaha
Saro-bahana ny raharaha politika eto Madagasikara. Mbola mikitroka ny lalan-kizorana ho an�ny vahaolana telo taona aty aorian�ny fanonganam-panjakana notarihin-dRajoelina sy ny mpomba azy.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Ankolafy Ravalomanana Manetsika ny olona any amin�ny Faritra
Nanao ny hetsika fanaony isaky sabotsy eo an-tokotanin�ny Magro Tanambao V, ny ankolafy Ravalomanana Toamasina. Sady fampitam-baovao no fanentanana amin�ny hetsika mafimafy kokoa manomboka izao no natao.
Andry Rajoelina Mitohy ny tsy fanajany ny tondrozotra
Dia mitohy hatrany ny tsy fanajan'i Andry Rajoelina ny tondrozotra ka hanaporofoany amin'ny rehetra fa mpitari-bato vilam-bava sy tsy manaja ny zavatra nekeny izy.
Famoriana olona tao Morondava
Nitondrana artista malaza, nomena vola ireo Sefo Fokontany
Nampidirina an-tsehatra ireo mpanakanto kalaza toa an-dry Jerry Marcoss sy Farah Jones niaraka tamin�ireo mpiangaly kilalaky malaza ao an-tan�na mba hanampy tamin�ny famoriana olona ao Morondava ny sabotsy teo.
Tetezamita Sempotry ny krizy, mamono afo sisa
Mavesatra ho an'ny fitondrana tetezamita ary manaratsy endrika azy ny fisian'ireo fitokonana isan-karazany amin'izao fotoana.
Miarahaba anao ry Jean a ! Tena nanankarem-baovao iny faran'ny herinandro iny an !
Saika tsy tafapetraka tao Roissy Charles de Gaulle
�Andry sy Mialy�
Karazana baobab vaovao
Voly reniala na �baobab� ! Io no nanamarika ny andro faharoa nijanonan�i Andry Rajoelina, sy ny ankohonany, tao Morondava renivohitry ny Faritra Menabe ny faran�ny herinandro iny, sady niala sasatra.
Velon-taraina ireo matihanina miasa etsy Analakely
Tsy hanaiky lembenana ny mpampianatra
Tonga eto Antananarivo ny solontenan�ireo DREN rehetra manerana ny Nosy, hoy Ramady Albert, mpikambana ao amin�ny sendika SEMPAMA Ihorombe miaraka amin�ireo namany efatra mirahalahy tarihan�ny filohany, Rajoma Louis.
Minisitra 10 amin'ireo 30 ao anatin'ny governemanta no nandray anjara tamin�ilay fambolen-kazo nokarakarain'ny fiadidiana ny tetezamita ka notanterahana teny Andranovelona - Ankazobe.